တိုက်ပွဲကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ လက်နက်တွေကို တပ်က ဖမ်းမ...
24 พ.ย. 2562 - 00:09 น.
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ TNLA တအာင်း/ပလောင်အဖွဲ့ရဲ့ လက်နက်တွေကို ဖမ်းမိတယ်လို့ တပ်မတော်က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်အပြီးမှာ ဒီလက်နက်တွေဟာ တအာင်းအဖွဲ့နဲ့ တပ်အကြား တိုက်ပွဲတွေဖြစ်အပြီး မရွှေ့ပြောင်းနိုင်လို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ လက်နက်တွေ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း TNLA က ပြောခွင့်ရသူက အတည်ပြု ပြောဆိုပါတယ်။
"တလောက တိုက်ပွဲ တော်တော်လေးများတယ်၊ တော်တော်လေး ပြင်းထန်တော့ တချို့နေရာမှာ လေကြောင်းက နှစ်ရက်၊ သုံးရက်ဆက် ပစ်ခတ်မှုတွေလည်း ရှိတယ်၊ အဲဒီလက်နက်တွေကို တချို့က ရွှေ့နိုင်တယ်၊ တချို့လည်း မရွှေ့နိုင်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျန်နေတာ တချို့ကို ဖမ်းဆီးရမိတာ ဖြစ်တယ်" လို့ TNLA က သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေး ဗိုလ်မှူး တာအိုက်ကျော်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
TNLA စစ်ဦးစီးချုပ်အဆင့်ရှိ တားဟိုပါ္လင်ရဲ့ ဇာတိရွာ အနီးကနေ ပခုံးထမ်း လေယာဉ်ပစ် လက်နက် အပါအဝင် လက်နက်တွေနဲ့ TNLA ယူနီဖောင်းတွေ သိမ်းဆည်းရမိတယ်ဆိုပြီး တပ်မတော်က နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလက်နက်၊ကျည်နဲ့ ယူနီဖောင်းတွေကို TNLA စစ်ဦးစီးချုပ်အဆင့်ရှိသူရဲ့ ဇာတိဒေသ ရှမ်းမြောက် နမ့်ဆန် ဟိုမိန်းရွာ တစ်ဝိုက်မှာ သိမ်းဆည်းမိခဲ့တာလို့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သိမ်းဆည်းမိခဲ့တာတွေက K-12 ပခုံးထမ်း လေယာဉ်ပစ် လက်နက်တစ်လက် အပါအဝင် လက်နက်မျိုးစုံ ၁၇၀ လက်၊ ကျည်မျိုးစုံ အတောင့် ၄၅၀၀၀ ကျော်၊ ယူနီဖောင်းအိတ်ကြီး ၇၇ အိတ် စတာတွေ ပါဝင်တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
TNLA ကတော့ လက်နက်တွေ ဖမ်းမိတာ မှန်ပေမဲ့ လက်နက်အရေအတွက်ကတော့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ကြေညာသလိုမဟုတ်ဘဲ အလက် ၄၅ လက်ကနေ ၅၀ ကြားပဲ ကျန်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တပ်မတော် ထုတ်ပြန်ချက်ထဲက ဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့ M-16 လက်နက်ကိုလည်း TNLA မှာ အသုံးမပြုဘူးလို့လည်း ဗိုလ်မှူး တာအိုက်ကျော်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တပ်မတော် ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ TNLA ရဲ့ တိုးချဲ့ စခန်း ၇၈ ခုထဲက ၄၁ ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပြီး TNLA ကတော့ အဲဒါတွေဟာ ရွေ့လျားစခန်းတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ အပစ်ရပ် လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ TNLA တအာင်း၊ပလောင် အဖွဲ့ အပါအဝင် KIA၊ MNDAA၊ AA တို့ဟာ ပဏာမ အပစ်ရပ် လက်မှတ်ထိုးရေးကို ညှိနှိုင်းနေဆဲ အဖွဲ့တွေ ဖြစ်ပြီး လတ်တလောမှာတော့ နှစ်ဘက်တွေ့ဆုံဖို့ကို ကြားခံအဖွဲ့အစည်းက တဆင့်ပဲဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ ဗိုလ်မှူး တာအိုက်ကျော်က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ တိုက်ပွဲကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ လက်နက်တွေကို တပ်က ဖမ်းမိတာလို့ TNLA ပြော